Momba an'i Everyinled
Ny vina sy ny iraka ataontsika
Mpivarotra tsirairay avy
Fitsidihana trano & QM
HD Series Pixel kely
Efijery LED Rental ao anaty trano
Efijery LED Rental ivelany
Media momba ny dokam-barotra
Scenarios amin'ny fampiasana vokatra
Efijery LED konseritra
Rindramba LED LED amin'ny sehatra
Fitaovana fampitana mivantana
Efijery LED Rent Rental
Vaovao momba ny indostria LED
Vaovao tsirairay avy
Pixel Pitch 3.91mm Small Pixel Pitch ao anaty trano dia miseho ho an'ny fihaonambe
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-24
Pixel Pitch 3.91mm Small Pixel Pitch ao anaty trano dia miseho ho an'ny haben'ny fihaonambe: 4mx3m Toerana: Slovak Eachinled dia manana vahaolana LED an-trano maro karazana, ny pikantsary kely misy fehezan-tsary anaty trano dia misy eo amin'ny 1.6mm, 1.9mm, 2.5mm, 2.9mm, 3.91mm amin'ny efitrano anatiny, ampiasaina bebe kokoa amin'ny fampisehoana fahitalavitra, sinema, efitrano fivorian'ny orinasa ...
Fampisehoana an-trano sehatra an-tsehatra nitondra rindrina P4.8 SMD Indoor Led Display
Trano fisehoan-javatra an-tsehatra an-tsehatra Led Wall P4.8 SMD Indoor Led Display Dimension: 3x2m Karazana vokatra: P4.8 Amin'ny faran'ny herinandro dia matetika isika no mahita hetsika marobe amin'ny toeram-pivarotana, fampiroboroboana ny vokatra fivarotana lamaody, fampiroboroboana vokatra vaovao, fampisehoana fiara finday ary vokatra hafa fampiroboroboana. miaraka amin'ny technol ...
Ny efijery LED P3 HD miolaka isaky ny tetik'asa Casino ho an'ny tetik'asa Casino
Faritra: 20.736mx2.304m. Any: ny haino aman-jery Sipra Advertising dia nifanakalo tamin'ny gazety radio sy boky nentim-paharazana ka hatrany amin'ny tamba-jotra fahitalavitra ankehitriny sy ny fampisehoana LED matihanina anaty / ivelany. Manohy mandalina ny fanavaozana i Everyinled, nanao ny toerany manokana amin'ny sehatry ny fampirantiana. Izahay ...
Firifiry ny fomba fametrahana ao amin'ny hotely?
Misy fomba fametrahana 3 indrindra ao amin'ny hotely. ■ Ny rindrina LED ao anaty rindrina izay napetraka ao anaty rindrina dia midika hoe apetraka eo afovoan'ny sehatra. Amin'ny lafiny roa amin'ny sehatra dia misy ny tabilao KT, sary hoso-doko na lamba firakotra lamba firakotra, izay mamela ny olona hahita sary fotsiny. Ity karazana LE ...
Ny efijery P3.9 an-trano 500 metatra toradroa tarihina dia ho tahiry amin'ny faran'ity volana ity
Ny fangatahana rindrina horonantsary P3.9 nitarika dia nihoatra ny famatsiana. 500 metatra toradroa ny tontam-bokin'ny led dia namidy androany, noho izany dia nanapa-kevitra ny hitazona 500 metatra toradroa hafa amin'ity videowall ity izahay. Fa maninona no nalaza be ity modely natsangana ity? Mahaliana ny fandinihana iray mampiseho fa noho ny efijery LED fanofana an-trano ...
Ledwall ho an'ny hetsika mivantana an'ny Papa Francesco any Italia
Adiresy: Italia Ledwall Size: 6mx4m Tamin'ity taona ity dia niverina tany Italia ny Papa Francesco ary tonga nitsidika ny orinasan'ny mpanjifanay tamin'ny faha-7 aprily mba hanao serivisy fanofana. Tena voninahitra lehibe ho anay ny manome azy ny rindrina. Ny tontonana P6.25 fanofana any ivelany dia namboarina tamin'ny 2016, ny fivarotana an'ity l ...